समानुपातिकमा कांग्रेसका को को छन् ? (समावेशी अाधारसहितको पूर्ण सूची ) | Nagarik News - Nepal Republic Media
समानुपातिकमा कांग्रेसका को को छन् ? (समावेशी अाधारसहितको पूर्ण सूची )
१५ कार्तिक २०७४ २ मिनेट पाठ
काठमाडौं-नेपाली कांग्रेसले एक दर्जन केन्द्रीय सदस्यलाई प्रतिनिधिसभातर्फको समानुपातिक सूचीमा राखेको छ । पार्टी कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवसहितका नेतालाई समानुपातिक सूचीमा राखिएको छ । यस्तै कांग्रेसले उद्योगपति विनोद चौधरीलाई पनि समानुपातिकको सूचीमा राखेको छ ।
त्यस्तै, कांग्रेसले प्रदेशसभामा पनि पार्टीका प्रभावशाली नेताका साथै व्यवसायीलाई समेटेको छ । कांग्रेसले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक उम्मेदवारको सूची निम्नअनुसार छ:
प्रकाशित: १५ कार्तिक २०७४ ०७:४९ बुधबार
समानुपातिकमा कांग्रेसका को को छन् समावेशी अाधारसहितको पूर्ण सूची